GoDaddy: Boobs နောက်ကွယ်မှထွက်ခွာခြင်း၊ Martech Zone
GoDaddy - Boobs ကိုနောက်ကွယ်မှ ထား၍ Ass ကို Kicking လုပ်ခြင်း
တနင်္လာနေ့, ဇွန်လ 16, 2014 အင်္ဂါနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 26, 2019 Douglas Karr
GoDaddy ကိုမုန်းတယ် ငါတကယ်လုပ်ခဲ့တယ် အမှတ်တံဆိပ်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာသုံးနိုင်တယ်ဆိုတာမယုံဘူး မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် cleavage နှင့်ဤမျှလောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတည်ဆောက်ရန်ဆက်လက်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုသက်ဆိုင်ရာ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိ၊ ပရိသတ်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေရန်ကြိုးစားအားထုတ်ကြတဲ့စျေးကွက်သမားတွေကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ရိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာထွက်လွယ်ကူသောလမ်းဖြစ်ခဲ့သည် ... ထိုသို့အလုပ်လုပ်ပုံရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များအားလုံးကိုအခြားဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုရန်နှင့်ဝေးဝေးနေရန်အကြံပေးခဲ့သည်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ ပို၍ များလာသည် ခဲ့ကြ GoDaddy ကိုအသုံးပြုခြင်း။ ၀ န်ဆောင်မှုကိုသူတို့သုံးနေရုံသာမကဘဲကျွန်မကိုသူတို့ပြောနေသည် ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဘယ်လောက်ကြီးမြတ် ကုမ္ပဏီထံမှအမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်တစ်ဖက်တွင်၎င်း၏ဖောက်သည်များနှင့်သူပေးသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဂရုစိုက်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်တစ်ခုမှာလူငယ်များနှင့်ဗလာကင်းမဲ့သည့်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးဖြစ်သည်။
သို့သော်ဒီရေသည်လှည့်နေသည်။ သူငယ်ချင်း ခရစ္စတိုဖာကာဖီ (GoDaddy ၏အသင်းအဖွဲ့၌ပါ ၀ င်ခဲ့သူ) ငါ့ကိုသူတို့၏ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးအကြီးတန်းဒါရိုက်တာ Susie Penner နှင့်ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး Chief Communication Officer နှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်စကားပြောဆိုခဲ့သည်။ Karen Tillman။ ဒါအမှန်ပဲ။ က Susie နှင့်တစ်ဦး ကရင် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအသစ်ကို ဦး ဆောင်နေသည်။ ကရင်သည်အကြီးတန်းခေါင်းဆောင်မှုတွင်တစ်ခုတည်းသောအမျိုးသမီးမဟုတ် ၂၀၁၂ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်ခန့်အပ်ထားသော GoDaddy ၏စီအီးအိုအသစ် Blake Irving သည်ကုမ္ပဏီတွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုတိုးတက်စေသောပြောင်းလဲမှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ GoDaddy သည်သူတို့၏ IPO အတွက်ပြင်ဆင်နေသည်.
GoDaddy ၏ကြော်ငြာမှာလည်းပြောင်းလဲနေပါသည်။ သူတို့ကလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အများပြည်သူအတွက်သတင်းစကားကိုပေးသောဤ SuperBowl ကြော်ငြာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ GoDaddy သည်သူတို့၏အိပ်မက်များကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ကူညီနေသည်။
မှ - မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ domains, hosting, Hosting စီမံခန့်ခွဲ WordPress ကို, SSL ကိုလက်မှတ်များ, Microsoft Office 365 hosting, အွန်လိုင်းစာရင်းကိုင်တစ်ဦး Website Builder, အီးကုန်သွယ်ရေး နှင့် ဒေသတွင်းရှာဖွေရေးပရိုဂရမ်များ… GoDaddy သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်များအတွက်အသင့်တော်ဆုံးကိရိယာများရှိသည်။ သူတို့ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေနဲ့လိုက်ဖက်ပြီးသူတို့ဟာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုလျှောက်လှမ်းနေတယ်လို့ယုံကြည်တယ်။
ထိုစဉ်တွင် boobvertising သူတို့နောက်ကွယ်မှာတော့ GoDaddy ဟာပျော့ပျောင်းသွားပြီဟုမဆိုလိုပါ! ထွက်ခွာသည် Kick Ass ၏ GoDaddy ကြေညာစာတမ်း:
ဂုဏ်ယူပါတယ်, GoDaddy! မင်းငါ့ကိုမြည်းရိုက်နေပြီလို့ငါထင်တယ်
Tags: Blake က Irvingceo godaddyခရစ်စမတ် carfiGoDaddyကနဦးအများပိုင်ရာပူဇော်သက္ကာIPOKaren Tillmansusie pennerKick Ass ၏ GoDaddy ကြေညာစာတမ်း